अब परिवार नियोजन संघले पनि टेष्टट्युव वेवी सेवा सञ्चालन गर्ने - Health Today Nepal
काठमाडौं, १ असोज : नेपाल परिवार नियोजन संघले टेष्टट्युव वेवी अर्थात आईभीएफ (इन भर्टो फर्टिलाइजेसन) सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । निःसन्तान दम्पतीको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राखेर संघले दशै लगत्तै टेष्टट्युव वेवी सेवा सहितको आईभिएफ क्लिनिक सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल परिवार नियोजन संघका कार्यकारी प्रशासक डा. नरेशप्रताप केसीले आउँदो दशै लगत्तै परिवार नियोजन संघको ललितपुरस्थित केन्द्रिय कार्यालयको क्लिनिकसँगै आईभिएफ क्लिनिक सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । डा. केसीले भने, ‘यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गरिरहेको परिवार नियोजन संघले अहिलेसम्म आईभिएफ सेवा दिन नसक्दा अपुरो जस्तो थियो । अब यो सेवा पनि सञ्चालन हुने भएपछि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सबै सेवा दिन सक्षम हुने छौ । ’
भारतीय विज्ञहरुको सहयोगमा संघले यो सेवा सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल परिवार नियोजन संघका परिवार नियोजन विज्ञ डा. ओम महर्जनले जानकारी दिए । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, तालिम र अन्य तयारी भइरहेको डा. महर्जनले बताए ।
सन् १९५९ मा आफ्नो स्थापनादेखि नै संघले तिन दर्जनबढी जिल्लामार्फत परिवार नियोजन लगायत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सेवा गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा सन् २००४ जुलाई १० मा पहिलो पटक ओम हस्पिटलबाट टेष्ट ट्युव वेवी सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । अहिले आधा दर्जन बढी अस्पतालमा यो सेवा सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २० प्रतिसत दम्पतीमा कुनै न कुनै किसिमको निसन्तानपनको समस्या छ ।
Previous article मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकबाट डा.ज्ञवाली हटाइए
Next article कोरोना महामारीका कारण परिवार नियोजन सेवा प्रवाहमा समस्या